Fatuux Tech – Page 2 – The World Class Tech Update
Haddaan ku hormarno Android ka, waa system kawada dhaxeeya shirkaddaha taleefanada soo saartay. Waxaana lahaatay shirkadda weyn ee Google ayadaana hadda hormariso. Android ka waxuu ku shaqeeyaa inta taleefan kasoo hartay iPhone ka. Waana system ruux kasta hormarin karo fikradna ku darsan karo. asal ahaan system kaan ayaa loo soo galiyay internet ka si tijaaba … Continue reading Maxey ku kala duwan yihiin Android iyo iOS?? →
Fatuux Cade	Uncategorized	Leave a comment February 26, 2019 1 Minute
Waa maxay 5G? Sidee u shaqeysaa?!!
5G waxaa laga soo gaabiyay marka hore ( fifth generation) jiilka 5aad ee technology yadda. Waxey suurta galineysaa iney kor u qaado xawaaraha internet ka qaasatan Wireless ka, Waxeyna ka xawaara badisaa Wire Network ga. Sababta loo soo saaray ayaa ah in lahelo xawaare sare oo internet ah, internet lagu kalsoonaan karo shaqadiisa, hufnaanta iyo … Continue reading Waa maxay 5G? Sidee u shaqeysaa?!! →
Fatuux Cade	Uncategorized	2 Comments February 24, 2019 February 23, 2019 1 Minute
Sidee usoo ceshan kartaa sawir ama muuqaal aad ka tirtay iPhone kaaga ama iPad kaaga.!!
Sawiradda lagu keediyay taleefannada iyo qalabyada teknooloojiyadda waxey ka fiican yihiin kuwa lagu keediyay albumo sidii hore. Sababtoo ah waqtigaa rabto ayaad arki kartaa, majirto wax haleyn karo biyo iwm, si dhaqsi ah ayaad raadin kartaa. Balse waxey ku xiran tahay haddii aadan tirtirin. lkn haddii ay dhacdo waad soo ceshan kartaa qaas ahaan haddii … Continue reading Sidee usoo ceshan kartaa sawir ama muuqaal aad ka tirtay iPhone kaaga ama iPad kaaga.!! →
Fatuux Cade	Mobile Apps, Tech News	Leave a comment February 21, 2019 February 21, 2019 1 Minute
Qiimaha iyo tilmaamaha uu wato mobile ka Galaxy S10:
Iyadoo la sugaayay soo bandhigidda Samsung taleefan keeda Galaxy S10, waxaa isa soo taraayo xogaga ku saabsan taleefankaas oo si sir ah loo soo helaayo. Waxuu tilmaamay website ga TuttoAndroid oo talyaaniga laga leeyahay in Samsung ee soo wado 3 nooc oo Galaxy S10. Taleefanka Galaxy S10 Lite waxuu ku imaan doonaa shaashad cabirkeedu yahay … Continue reading Qiimaha iyo tilmaamaha uu wato mobile ka Galaxy S10: →
Fatuux Cade	Uncategorized	Leave a comment January 30, 2019 1 Minute
10 Talaabo aad iskaga ilaalin karto tuugada online ka. Sidaan wada ognahay waxaa soo badanaya maalin maalinta ka danbeysa dhicida dadka oo laga xadayo Data dooda iyo arimahooda shaqsiyadeed. Haddaba sidaad iskaga ilaaliso tuugadaas waxaad u baahan tahay inaad sameyso 10 kaan talaabo. Isticmaal number sireed adag: number sireed kaaga waa inuusan ka koobnaanin waxyaabo … Continue reading Sidee iskaga ilaalin kartaa tuugada ka shaqeesata online ka. →
Fatuux Cade	Hacking News, Tech News	2 Comments December 18, 2018 2 Minutes
U guurida dhanka teknooloojiyadda.
Haddaan ka hadalno wadankeena Soomaaliya Technology yadda sidey kusoo gaartay iyo goorti ay soo gaartay iyo xilliga maanta aan taaganahnay heerka aan ka mareeno technology yadda waa wax aad u wayn oo la taaban karo. Waxey nasoo gaartay technology yadda xilligii Gumeystaha waxeyna aheyd mid quseeso dhanka isgaarsiinta waxaana loo yaqaanay Telegraph ama Telegram. Waxuu … Continue reading U guurida dhanka teknooloojiyadda. →
Fatuux Cade	Uncategorized	Leave a comment November 14, 2018 1 Minute